Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay Issimadda Gobalka Bari – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay Issimadda Gobalka Bari
Maarso 30, 2019 6:05 g 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa qasriga Madaxtooyada kulan kula qaatay Isimada Dhaqanka Gobolka Bari.
Kulankan uu Madaxweynuhu la qaatay Isimada dhaqanka ayaa daaranaa soo dhoweyn iyo is-xog wareysi guud waxaa qayb ka ahaa maamulka Gobolka Bari kan degmada Boosaaso qaar kamid ah Goleyaasha Dowladda iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Isimada dhaqanka Gobolka Barri ayaa Madaxweynaha dowladda Puntland ku bogaadiyey sooyaalka uu ka qaatay sugidda amniga iyo dhisidda ciidan midaysan oo ay yeelato Dowladda Puntland, kuna filan amaanka guud ee dalka, isla’markaana waxay Alle uga baryeen in uu u fududeeyo shaqada adag ee uu shacabkiisa u hayo.
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo kulanka hadalo muhiim ah ka jeediyey ayaa si balaadhan uga hadlay amaanka guud ee deegaanada Puntland gaar ahaan amaanka Gobolka Bari.
“Puntland marxalad cusub bay gashay intii isbadalka doorashadu ka dhacay 08 January 2019, waa shafarkii ugu horeeyey ee aan ku imaado Boosaaso intii ay doorshadu dhacday, Boosooso waa magaalada ganacsiga Puntland waa magaalo sifooyin badan oo dadka u sahlaysa in ay ku noolaadaan kulmisatay, waa magaalo ganacsi, waa magaalo xeebeed, waa magaalo aan dadku kala lahayn, waa magaalo qof kasta fursad-siisa”.
“Waxaan aad uga xumahay in mudadan danbe dadkii nocaas ahaa ay noloshu ku adkaatay in amni xumo badan ay dhacday, waxaan diyaar u nahay ani iyo golaha xukuumaddaba iyo Goleyaasha kale ee dowladdaba in Boosaaso ay ku soo noqoto Bardaqaasimtii kulmin jirtay cid walba oo nabada iyo samaha jecel waxaan ku celinayaa mar labaad cid kasta oo samo jecel Puntalnd waa u furan tahay
Shirkadda Samsung oo Sanadka 2020 soo saaraysa Taleefan sida Bina adaamka u shaqeynaya (Daawo)
Golaha Wasiiradda DFS oo shir xasaasi ah isugu yimid (Daawo)